पोखरामा बस चढ्दा पैसा बोक्नु पर्दैन::Online News Portal from State No. 4
पोखरामा बस चढ्दा पैसा बोक्नु पर्दैन
पोखरा, ४ चैत – पोखरा महानगरपालिकाले यात्रुहरुलाई ठगिनबाट जोगाउन ई–टिकेटिङ सिस्टमको सुरुवात गर्दैछ । नयाँ वर्षबाट सुरु हुने यो प्रणालीबाट यात्रुहरुले सेवाअवधिको पैसा सिधै कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसले सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा यात्रुहरु ठगिने अवस्थाको न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । बसमा चढ्यो, खुद्रा पैसाको समस्या ! एक सय सम्म त ठीकै छ, त्योभन्दा माथिको नोट दियो भने साट्नकै हैरानी ! अझ १२, १८ रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा त सोझै १५÷२० रुपैयाँ यात्रुहरुले दिनुपर्छ, १÷२ रुपैयाँमा सिधै यात्रुहरु ठगिने गरेका छन् । यात्रुहरुको यो समस्या अब भने पोखरा महानगरमा रहने छैन । महानगरभित्र चल्ने सार्वजनिक बसहरुमा ई–टिकेटिङ लागु हुँदैछ । सार्वजनिक बसमा विद्युतीय टिकट प्रणाली जडान गर्न आइतबार महानगर, पोखराका बस व्यवसायी समितिहरु र काठमाण्डौंको एन क्लाउड कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ ।यो प्रविधि सुरु भएपछि ब्यवसायीले प्रत्येक यात्रुहरुलाई जिपिएस जडित विशेष प्रकारणको विद्युतीय कार्ड दिइनेछ । जुन कार्डको माध्यमबाट यात्रा गरेको ठाउँकालागि तोकिएको रकम स्वतः कार्डबाट बैंकमा ट्रान्सफर हुनेछ ।
महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीका अनुसार पोखरा महानगरभित्रका ८ वटा बस व्यवसायी समितिका ८ सय बसमा ई–टिकेटिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।सुरुसुरुमा यात्रुहरुले नगदै दिएर पनि यात्रा गर्न सक्नेछन् । उसो त, निश्चित समयसम्मको लागि छुट पनि दिइने उनले बताए । ‘१० हजार वटा टिकटलाई निश्चित समयसम्म निःशुल्क सुविधा दिईनेछ, त्यसपछि भने यात्रुहरुले उक्त कार्ड खरिद गर्ने र सोबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीको यात्रालाई व्यवस्थित गर्न यसो गरिएको हो ।’यात्रुहरुले यो कार्ड १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न सक्नेछन् । विशेष प्रकारको कार्ड उपलब्ध गराउनेछन् । यात्रुले बोकेको त्यही कार्ड गाडीका सहयोगीले मेसिनमा ‘टच’ गराउनेछन् । जिपिएस जोडिएकोले यात्रा गरेको ठाउँको रकम स्वतः कार्डबाट बैंकमा ट्रान्सफर हुनेछ । कार्ड प्रयोग गर्ने तालिम पनि कम्पनीले दिनेछ । टिकेटिङ सिस्टम जडान र नियमित सुचारु गर्नका लागि कम्पनीले पोखराका प्रत्येक बसबाट २ हजार २ सय रुपैयाँका दरले खर्च असुल्नेछ ।सबै बसमा लागू भए सेवा झनै प्रभावकारी हुने प्राविधिक कम्पनीका सिईओ दिपेन्द्र नारायण श्रेष्ठले बताए । कार्ड प्रयोग गर्ने तालिम कम्पनीले दिनेछ । पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले घरघरमा हुने बस स्टेसन यो ब्यवस्थापछि हट्ने र निश्चित स्टेसन कायम हुने बताए ।
यस्तै, यात्रुहरुको ठगीको गुनासो पनि हट्ने उनले दावी गरे । निश्चित ठाउँमा स्टेशन राखिने र तोकिएभन्दा बढी भाडा बुझाउन नपर्ने उनको भनाइ छ । जिसीले पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा कार्ड सिस्टम लागू गर्न लागेको बताए । उनका अनुसार पोखरामा चल्ने गाडीहरुको स्तरबृद्धीमा पनि महानगरले जोड दिएको छ । तत्काल पोखरा नगरभित्रका गाडीमा जडान गर्ने र पछि लामो दुरीका गाडीमा पनि यो सिस्टम चलाउने पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऐनकुमार साईले बताए । पोखरामा रहेका पृथ्वी बस समिति सहित पोखरा बस ब्यवसायी समिति, स्थानीय श्रृंगा यातायात, बेगनासताल बस सञ्चालक समिति, विन्ध्यवासिनी बस ब्यवसायी समिति, पोखरा फेवा यातायात प्रालि, र ट्याक्सी ब्यवसायी समितिले ई–टिकेटिङ सिस्टममा जान राजी भएका छन् ।